Abazange bakhuphukele eSiyoni futhi babhujiswa e-Auschwitz, uRebbe wabatshela ukuthi bangakhuphukeli. URabi Michael Avraham
Abazange bakhuphukele eSiyoni futhi babhujiswa e-Auschwitz, uRebbe wabatshela ukuthi bangakhuphukeli.
Izimpendulo > Isigaba: Ukholo > Abazange bakhuphukele eSiyoni futhi babhujiswa e-Auschwitz, uRebbe wabatshela ukuthi bangakhuphukeli.
Eshaywe amahloni Ubuzwe ezinyangeni ezi-5 ezedlule
Umndeni wami wenelisa ukubuyela eZiyoni. (Ngokulandela inzondo yabezizwe ababebazungezile, babecebe ngokwedlulele futhi bengasweli lutho)
URebebe wabatshela ukuthi bahlale ekudingisweni futhi wathembisa ukuthi kuzoba kuhle.
Kholwani ukuthi i-rebbe ayizange ibuyele eSiyoni no-Efrayimi e-Auschwitz ye-XNUMX futhi igazi lenzalo yabo nalo livela ku-rebbe owathembisa futhi ngenxa yesithembiso sabo labhujiswa.
Kodwa kuJeremiya XNUMX ngokuphambene abaprofethi bamanga bakhuthaza ukubuya kweSiyoni noJeremiya egameni likaNkulunkulu uthi cha.
Futhi manje lo mkhuba usushintshile, eBhabhiloni cishe sizokwakha izindlu futhi sishade nabesifazane. NabaseJerusalema ekuhlatshweni nasekulambeni.
Ngakho yini elungile?
Ukubuyela eSiyoni noma ngokuphambene ukuyohlala ekudingisweni?
Lokhu kubamba okunzima. Konke kukodwa. U-rebbe owathi umbono wakhe wokungaqhamuki ngezizathu zakhe, usho okuthile okusemthethweni. Lokho okungahambanga kahle ekugcineni akumphoqi ngomphumela. Igazi lomuntu alikho ezandleni zakhe. Uma enza izithembiso ezinganakekeli mhlawumbe nangaphezulu.
Ngokuqondene nabaprofethi, basho izinto ukwaziswa okuyisiprofetho, ngakho kukhona ingxoxo ehluke ngokuphelele. Uma bethembisa utho kusuke kusegameni leNkosi.
Ngokuvamile, impendulo yombuzo wokuthi ukuthuthela kwelinye izwe akuyona impendulo efanayo njalo. Kwesinye isikhathi kulungile ukwenyuka kwesinye isikhathi ungakhuphuki. Nakuba kukhona umyalo wokuhlaliswa kwezwe, kodwa umprofethi ususa noma yini eTorah ekuQothulweni Kwesizwe noma ngehora.
I-Sociology kanye nengqikithi Vuliwe Ngokushona kukaProf David Halvani Weiss ongasekho (ikholomu 485)